कतिपय, घर छोडेर, थोरै तहमा सचमुच उभिएको, तपाइँ अचानक एनालिभेसिटीमा घर, वा घरघर वा गेराज को कुञ्जीहरू देखिन सकिएन? तिनीहरू कहीं पनि फेला परेनन् - जेबमा, तालिकामा, वा दराजको छातीमा! यस अवस्थाबाट बच्नुहोस्, यदि तपाई उनीहरूलाई उनीहरूको विशेष स्थानमा लिनुहुन्छ। तिनीहरू घरपरिवारको रूपमा सेवा गर्न सक्छन्, जो कि सुधारिएको सामग्रीबाट स्वतन्त्र उत्पादन गर्न निकै सक्षम छन्। तपाईं निस्सन्देह, केवल तीनवटा नाकहरू पर्खालमा डुबाउँछन् र यसलाई सुअवस्थित गर्दछ, तर तपाइँ सहमत हुनुहुनेछ कि एक सुन्दर मूल कुराले अझ राम्रो र सौंदर्यशास्त्रमा हलचलमा हेर्नेछ!
पर्खाल घरपरिवार: प्रकार
सजावटी पर्खाल गृहमन्त्री एक अद्भुत वरदान बन्न सक्छ, जसले तपाईंको जनलाई आफ्नो मौलिकता र असामान्यसँग खुसी पार्छ। यसको अलावा, यो आदेश बहाल गर्न यो उत्कृष्ट सहायक पनि हो।
वास्तवमा सबै पर्खालका घरपरिवारहरू दुई प्रकारमा विभाजित गर्न सकिन्छ - खुला र बन्द।
पहिलो छ, वास्तवमा, कुनै पनि उपयुक्त आधार हुकसँग संलग्न छ। दोस्रोमा निष्पादनमा केही जटिल छ, किनभने तिनीहरू एक लकरको प्रतिनिधित्व गर्दछ, प्रायः एक वा धेरै अलमल्याउनेहरूसँग।
शुरुवात डिजाइनरको लागि सरल विकल्प भनेको साधारण गृहनीपर्स बनाउन र आफ्नै हातले सजाय हो। तलका फोटाहरूले यी कुराहरू कसरी हेर्नु पर्ने अनुमानित विचार दिन्छ। खुला "किस्टस्टोर" डिजाइन गर्न तपाईंले सबै चीज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन हुकहरू संलग्न गर्न सजिलो छ। यस दृष्टिकोणको लागि:
एक माछा, एक रूख, एक घर को एक प्रतीक, रूख बाट काटेर;
कुनै पनि प्लेट वा पुरानो शेल्फ;
ग्लास वा आईना।
सामान्यतया, कुनैपनि पुरा तरिकाले सामान्य वस्तुले गृहस्थकर्ताको रूपमा त्यस्तो चीज सिर्जना गर्न आधारको रूपमा सेवा गर्न सक्छ। यस यन्त्रका फोटोहरूबाट
तपाइँ सामान्य तलको सामान्य सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
लकरको रूपमा यो प्रकारको घर (लूका हेर्नुहोस्) प्रिङ आँखाबाट लुकेको न केवल सबै कुञ्जीहरू, तर सामान्यतया हल्लामा (बिजुली मीटर वा ढोकाको बाकसमा ) केही आकर्षक वस्तुहरू पनि छन् । यो उल्लेखनीय छ कि बन्द घरको पर्खालमा खुला एक भन्दा बढी प्रदर्शन गर्न परिमाण अधिक परिमाण हो। यसको निर्माणको लागि हस्तकला पसलहरू र पसलहरूमा खरिद गर्न सकिन्छ जुन सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, साथसाथै काठ, प्लास्टिक र भित्री हार्डबोर्ड बाध्यकारी, विभिन्न आकार र आकारको अलमारियाँ बनाइएको बनाइएको। बन्द गृहनीकरण पर्खाल, तपाईंले देखेको फोटो, decoupage को प्रविधिमा बनाइयो।
तपाईं विभिन्न प्रकारका तरिका, प्रविधिहरू र शैलीहरूमा यस्तो लकर-भण्डार सजावट गर्न सक्नुहुनेछ - चित्रकारीमा decoupage वा साधारण उपकरणबाट। यदि तपाईं कसरी थाहा नपाउने र अन्य तरिकाहरू थाहा नहोला, केवल कैबिनेटको चमक र सजावटी रंगीन कंक्रीटहरू, गोलाहरू वा सिक्काहरू भित्र पस्न सक्नुहुन्छ। घरपरिवारमा इकट्ठा भएका घडीहरूले यसलाई कार्यक्षमता थप्न नसक्ने, तर यो विशेष शैली र आकर्षण पनि दिनेछ।
फोटो फ्रेम रिंच
यस्तो कुरा गर्न यो धेरै समय, प्रयास र पैसा लिने छैन। यो सानो सानो पुरानो फ्रेम, थोडा एक्रिलिक प्यान्ट, घुमाउरो सानो हुक वा गोंद को लागि पर्याप्त छ, उदाहरणका लागि, "पल" वा "Superglue।"
पहिला तपाईं बालुवाटारमा पुरानो कोटिंग हटाउन फ्रेममा हिड्न आवश्यक छ, त्यसपछि उपयुक्त रङ प्यालेटको सतहलाई चित्रण गर्न, राम्रो सुचारु दिनुहोस्। यो हुक तल भित्र र फ्रेम को भित्री शीर्ष मा पेंच बनाइन्छ।
अघिल्लोको रूपमा यस्तो गृहकार्य गर्न कठिन छैन, तर यो अत्यन्तै रचनात्मक देखिन्छ। यसको निर्माणको लागि तपाईलाई पुरानो फोर्क र चम्मच, काठको बोर्ड, एक्रिलिक प्यान्ट, ग्लुको आवश्यकता पर्दछ। खाली रंगमा पङ्क्तिहरू चित्रित हुनुपर्छ, राम्ररी सुत्नुहोस्। कटोरी आधा मा बाक्लो र तयार सतह को लागि सुरक्षित रूप देखि चिपके रहनु पर्छ। हलवेको लागि असाधारण कुरा तयार छ।
Decoupage को प्रविधी मा रिंच
तपाईंको हलको डिजाइनको सिद्ध तत्व यस्तो खुल्ला घरको भित्री पर्खाल हुनेछ, जसको सजावट डेमोपिक्स टेक्निकमा सजावटको लागि एकदम सही छ।
यो चित्रकारीको अनुकरण हो, जुन लगभग कुनैपनि उपयुक्त सतहमा गरिन्छ, यसलाई काठ, प्लास्टिक, धातुमा राख्नुहोस्। यो पेपर नैपकिन्स, विशेष decoupage कार्डहरूसँग प्रिन्ट गरिएको छ वा प्रिन्टरमा प्रिन्ट गरिएको रेखाचित्र मनपर्छ।
एक काठको घर बनाउने जस्ता चीजलाई सजाय गर्न, तपाईंलाई चाहिन्छ:
Napkin, decoupage वा प्रिन्टर मुद्रणआउट;
आकार हुकका लागि उपयुक्त स्व-ट्यापिंग स्क्राउहरू।
Decoupage को लागि टाँसन (तपाईं PVA पानी 1: 1) संग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ;
सिंथेटिक फ्लैट ब्रश;
स्क्रूड्री वा शिकारी वाहक;
लाक एक्रिलिक, नौका वा पालट।
Decoupage प्रायः महिलाहरु संलग्न हुन्छन्, त्यसैले हामी प्लाईवुड, जिरा लिन्छौं र एक महिलाको साथ जानुहुन्छ कि काठको यस नन्दस्क्रिप्ट टुक्रा कटनीको आकारको आकारमा आकारको आकारको आकारमा जुन आकारका लागि उपयुक्त हो।
यदि तपाईं काममा नैपकिन प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, एक्क्रेलिक प्यान्टसँग हल्का, अझ राम्रो सेतो रङको साथमा उपचार राम्रो हुन्छ। यसले तस्वीरलाई उज्ज्वल बनाउन र संरचनाको समग्र पृष्ठभूमिमा "गुमाउनु हुँदैन" लाई अनुमति दिन्छ। पेंट गरेपछि, तपाईं काम गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। Gluing नैपकिन्स को तरिकाहरु को वर्णन, decoupage कार्ड र प्रिंटआउट संग काम एकदम धेरै धेरै छ। Decoupage को प्रविधिमा घर-रक्षकको रूपमा यस्तो gizmo सिर्जना गर्न, तपाईं मनपर्ने कुनै पनि विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईंको लागि सही छ। मुख्य चीज धीरे र सबै हावा पेपर अन्तर्गत हटाउन, गन्तब्य झन्डाहरू र अनियमितताहरू बाहिर निस्कन्छ। चिपकने वाला डुबेर पूर्णतया पछि, उत्पादन लाई लाक को धेरै परतहरु लाई कवर गर्न को लागी चाहिए। अन्तिम तह लागु गरेपछि, यो दिनको समयमा राम्ररी सुचारु गर्न अनुमति दिनुपर्छ। यस समयको अन्तमा, हुकहरू घरपरिवारसँग जोडिएका छन्, र पर्खाललाई पछाडि पुर्याउँछ।
एउटै प्रविधीमा, तपाईं बाटो "घर" को ढोका र भित्रको सतह सजावट गर्न सक्नुहुन्छ।
जिप्समबाट आफ्नै हातको साथ एक गृहनी बनाउनुहोस् यो पहिलो नज़र जस्तो लागेन किन सजिलो छैन।
सिन्धुली भवन (जिप्सम) ;
सानो केक वा केकबाट प्लास्टिकको फारम;
छानिएको आत्म-ट्यापिंग हुक;
Decoupage को लागि नेपकिन (नक्शा या प्रिंटआउट);
टाँसन वाला decoupage (पानी संग PVA);
पहिलो, प्लास्टिक ढाँचा को एक तरफ मा आवश्यक पेंच को खराब संख्या हुनु पर्छ। जिप्सम पानीको साथ मोटी खट्टा क्रीममा पतला छ, मोल्डमा राखिएको छ, तारको टुक्राबाट पाश घुसाउनुहोस्, अलबस्टर एक राम्रो सुक्खा दिनुहोस्, पछि पछि पर्खाल राम्रो सेतो भत्काउनु पर्छ। जिप्सम billet पछिल्लो धुंधला र decoupage को लागि एक आदर्श सतह हो। एक फंतासी जडान गरेर, तपाईं एक ठाडो कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको हलवा को गृह को सजाउन सक्छ।
एक पर्खाल घर बनाउने व्यक्ति सबैको शक्ति भित्र छ जुन यो चाहन्छ, र यसको लागि केहि विशेष कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दैन। आफ्नै घरपरिवार बनाउन डरो नगर्नुहोस् । यस लेखमा भएका तस्वीरहरूले छनौट गर्ने निर्णय र सजावटको विचारलाई तुरुन्तै मद्दत गर्नेछ।
र नबिर्सनुहोस्, आफ्नै द्वारा बनाईएको चीज आफैले आफन्तको एक कार्यात्मक वस्तु होइन, यो तपाईंको मित्रहरु को लागि गृहिणीकरणको लागी एक अद्भुत वरदान पनि हो ।
आफ्नो हातले बनाएको पर्खाल-पहेलो बिल्कुल अनन्य कुरा हो, आदर्शमा तपाईंको स्वाद र आन्तरिक सङ्गठन।
Motoblock र motoblock को लागि घर बनाइयो
घरको साइटमा जल निकासी कसरी बनाउने?
खरगोशको लागि उपयुक्त फीडर्स: फिड बचत र कानका स्वास्थ्य
बारेमा कति एक बिरालो बसोबास
म्याड्रिड - संसारको सबैभन्दा सुन्दर शहर
"आयुक्त रक्स": अभिनेता र भूमिका
बाहिरी लागि काठ लागि रंग छान्ने